Gudoomiyaasha degmooyinka Banaadir oo tababar la siiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaasha degmooyinka Banaadir oo tababar la siiyey
20th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Waxaa xalay Muqdisho lagu soo gebagebeeyey tababar la siiyey gudoomiyaasha 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Tababarka loosoo xiray guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu baray maamul wanaagga iyo sida guddoomiye walba uu u adkeyn lahaa ammaanka degmada uu madaxda ka yahay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen Muun-gaab oo ka hadlay xiritaanka tababarka la siiyey gudoomiyaasha gobolka Bnaadir ayuu ku sheegay in tababarkan uu qayb weyn ka qaadan doono isbedel dhinaca ammaanka ah oo ka dhaca Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa intaa ku daray in maamulkiisa uu wado qorshihii 2016-ka lagu gaari lahaa maamul cusub oo ku yimaada hab doorasho ah kaasoo bedeli doona maamulkiisa.
“Waxaan doonayno waa inaan furno jidkii loo mari lahaa in maamulkan uu bedelo maamul ay shacabka Muqdisho soo doortaan marka la gaaro 2016-ka, waxaana ku faraxsanahay in caawa tababar faa’iido badan loosoo xiray guddoomiyeyaasha gobolka Banaadir,” ayuu yiri Muun-gaab.
Sidoo kale, waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuuumadda Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre oo sheegay in guddoomiyeyaasha tababarka loosoo xiray ay horyaallaan howlo badan oo adag, uuna rajeynayo in tababarkan uu wax badan oo howlahooda ah ka caawin doono.
Wixii ka dambeeyey bishii Maarso ee sanadkaan 2014 ayaa gudoomiye Muungaab xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii hore, wuxuuna ku badelay gudoomiyaal cusb.
Alshabaab oo sii daayey shaqaalaha markab ku caaryey Shabeellaha Dhexe
Kenya:Dead bodies of Somali businessmen discovered in Nairobi